PANSIES: SAWIR UBAX, SHARAXAAD, NOOCYO KALA DUWAN, SIFOOYINKA DAAWOOYINKA EE VIOLA, HALYEEYGA MUUQAALKA, IYO SIDOO KALE GEEDKA SANADLAHA AH AMA AAN, TAAS OO CALAAMAD U AH - SOOSAARKA DALAGGA
Ma dooneysaa inaad wax walba oo ku saabsan pansies ogaato? Tifatiran faahfaahsan ee ubaxa leh sawir
Pansies - warshad qurux badan oo ah midabo kala duwan. Hore iyaga waa ka suurtoobaan in ay ka gudbaan, sida oo kale, adigoon ku faraxsanayn. Ubax Kuwani waa mid aad u caan ah ee beerta.
Dhammaan noocyada waxay aad u la mid yihiin midba midka kale, waxay ku kala duwan yihiin midabka kaliya. Maanta waxaan ka hadli doonaa sida ugu quruxda badan. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Kudka Tricolor - ubax leh ciriiri, branched, khafiif ah afkoda, 15-20 centimeters sare. Leaves waxaa si habboon loo habeeyay. Qaabka ayaa yaraa wareega iyo wadnaha-qaabeeya. Waxay kudhowyihiin shuruudaha waaweyn. Caleemaha on afkoda - sessile, iyo hoose - petiolate.
Ubaxku waa mid aad u ballaaran, keli ah, qaab aan caadi aheyn, waxay u furan yihiin pedicels. Dhexdhexaadiyuhu wuxuu gaaraa 3-4 sentimitir. Corolla waxay sameeyaan shan dabaq oo aan isku mid ahayn qaab kasta. Qeybta hoose waa jaale ama caddaan. Waxay ka weyn tahay intiisa kale. Labada sare ee tufaaxu waa buluug-buluug ama buluug qoto dheer. Xaglaha badanaaba waxay leeyihiin midab khafiif ah.
Dhirta noocee ah: sanadlaha ama sannadka soo socda?
Pansies waa warshad dilka ah.. Badanaa, beeralayda hiwaayadda waxay iibsadaan ubax hal sano ama laba sano ah dukaamada. Su'aashu waxay ka timaadaa sababta aysan u qaadanin jilicsanaan. Waxyaabaha ay tahay in waqti ka dib ubax qurux badan lumiyo quruxdiisa. Saddex sano ka dib, geedka ayaa gaboobay. Buds noqdaan kuwo yaryar, ka dibna aan la abuurin.
Lama garanayo goorta iyo xilliga ay jiraan duruufta soo baxday. Dhammaan legends ayaa lagu soo bandhigay asalka khudbadda jilicsan, laakiin kuwa ay yihiin run iyo aan ahayn, sidoo kale ma cadahay. Halkan waa mid ka mid ah halyayadan:
Mar uun, ilaahyadii Venus waxay doonayeen inay ka soo baxaan indhaha aadanaha. Waxay aragtay qarsoodi qarsoodi ah oo ku taalla meel fog. Markaad maydhanayso, ilaahyadu si lama filaan ah ayey u maqleen shukumaan. Toogashada, Venus waxay aragtay indho indhayn dadka mugdiga ah. Waxay ahayd mid aad u xanaaq badan waxaanay go'aansatay in ay dadkaas ciqaabteeda ku ciqaabto. Laakiin Venus way awoodi wayday inay ciqaabto kuwa la yaabka leh, sidaa daraaddeed waxay u soo jeesatay Zeus, oo soo jiidatay foosha.
Waxaan kugula talinaynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan halyeeyga asalka Pansies:
Muxuu gogosha u eg yahay?
Pansies waxay leeyihiin stem khafiif ah leh caleemaha wareeg iyo ubax hal.. Dharka dhererka, waxay astaamuhu gaari karaan ilaa 30 sentimitir. Gudaha gudaheeda waa saddex xagal, dallacan, meel bannaan ama ciriiri. Mararka qaarkood, wax badan oo isfaham leh ayaa ka baxaya hal rooti.
Burooyinka hal mar leh shan faashad ah, taas oo ah, oo ay ku taal, waxay ku yaalliin barxadda saddex-geesoodka ah oo leh laba jawaan oo u dhow ubaxa laftiisa. Sepals ku yaal hoose ee ka badan size in ka badan xagga sare. Tones codka midabka leh waa mid buluug ah, midab leh iyo midabo kala duwan oo ka mid ah midabadan. Warshadu waxay leedahay shan shamiin oo loo riixay faleebo. Waxay la xiriiraan anterines leh filamiin gaaban oo gaaban.
Caleenta pansies waa petiole, waxay dhaleen ama maqnaashaha ku xiran xididdada. Qaababka caleemaha hoose waa ovoid. Caleemaha waa la jeexay. Waraaqaha sare waxay u egyihiin kuwo kala duwan. Qaabkooda waa lanceolate ballaaran. Ka tagaa iyaga waa yar yihiin. Caleen kasta waxay leedahay laba qaybood.
Xidigga ubaxa waa khafiif, ul iyo laan yar. Waa midab madow. Dhulku wuxuu ku dhowaadaa qiyaastii.
Noocyada ugu caansan sawirada
Waxaa jira labo qaybood oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah:
Inta badan, growers-ka soo iibsadaan Pansies waaweyn-ubax, sidaas darteed samayn qalad, sababtoo ah yar-ubax yar oo adag oo xoog leh. Ma cabsanayaan roobka iyo isbeddelka isbedelka heerkulka.
Waxaa jira saddex nooc oo dhir ah:
Kalluunka ayaa abuuray noocyo badan, oo ku saleysan noocyada kor ku xusan.
Kala duwan tani waxay leedahay ubaxyo qurux badan. Dhexdhexaadiyaha, waxay gaaraan 5-6 sentimitir. Kobaca maskaxda dheer, oo gaarta 10 sentimitir. Ubaxyada laftoodu maaha mid aad u iftiimaya, oo leh geeso istiraatiiji ah. Bushku wuxuu koraa 15 sentimitir dherer ah.
King Ice Ice
Wuxuu koraa dhererka 20 sentimitir. Inta lagu jiro ubaxyo ubaxyada ubaxyada ubaxyada leh ee ubaxyada cagaaran. On the tufaax hoose hoose waxaa jira dhibco sumad leh.
Fasalkaan, marka la barbardhigo qiyaasta kale ee weyn. In height dhererka 25 sentimitir. Ubaxa waa 6-7 sentimitir dhexroor iyada oo lakabyo dhoobo ah. Midabka - cadaan leh dhexda huruud ah.
Ubaxa wuxuu leeyahay midab aan caadi aheyn oo u eg sida godka. Daaqu waa mid isdhaafsan, wuxuu ku koraa dhererka 20 sentimitir. Waxay ku koraan rooga. Ubaxku waa jaale hurdi madow. Dhexdhexaadiyuhu kama badna 3-4 sentimitir. Kala duwanaantani waxay dareemeysaa mid aad u wanaagsan oo ku dhow ciidda oo dhan, oo leh biyo fiican..
Warshad oo lagu kala gooyo koritaankeeda degdegga ah iyo ubax dheer. Adonis waa mid aad u yar, oo qiyaastii 15 sentimitir dherer ahaan. Wuxuu leeyahay ubaxyo waaweyn. Labada sare ee tufaaxu waa mid buluug ah, saddexda hoose ee hoose waxay leeyihiin dhibco cadaan ah. Xayawaanku waxay isticmaalaan kooxo. Kala duwan waa jiilaalka jiilaalka.
Qalabka daawada ee loo yaqaan 'tricolor'
Tricolor xaddidan wuxuu leeyahay bogsashada guryaha, maadaama ay ka kooban tahay wax aan caadi ahayn. Waxaa ku jira salicylic acid, ascorbic acid, saliidaha lagama maarmaanka ah, fareeshka iyo wax badan oo kale. Noocyada noocan oo kale ah waxay bixisaa taageero waxtar leh cudurada.
Dhaqdhaqaaqa jirka jirka:
Waxay aaminsan tahay cuncun iyo cuncun.
Waa muhiim: Waxaad sameyn kartaa decoctions, infusions ama shaah ka ubax. Caabuqa faafinta waxaa lagula talinayaa in lagu daaweeyo cudurada habdhiska neefsashada, tusaale ahaan cudurrada bronchi, oof-wareenka, qaaxada.
Dhibcaha laga sameeyey dhirta ayaa xitaa daaweyn kara sanqadh. Isticmaalidda "tricolor" wuxuu si fiican u naqshadeeyaa cuncunka kaneecada kadib kaneecada carruurta yaryar..
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan sifooyinka daawooyinka ee Pansies (violetoror violet):
Maxay calaamad u tahay?
Pansies waxay calaamad u tahay daacad, xikmad, ixtiraam. Waxa kale oo ay calaamad u yihiin imaanshada guga, maadaama ay ugu horeyntii u barbareeyaan barafka ka dib.
Legend of ubaxa
Waxaa jira legends badan oo ku saabsan ubaxa iyo asalkiisa.. Mid ka mid ah halyeeyada ayaa sheegaya in markii gabadha Annie ay soo bandhigtay sheeko xad dhaaf ah. Waxay xiiseeyeen faahfaahinta nolosha dadka ajnebiga ah. Ciqaabtuna waxay u beddeshay geedka.
Waagii hore Ruushka wuxuu ku sugnaa diintooda ku saabsan pansies. Waxay yiraahdeen jacaylka, gabadha Annie waxay noqotay ubax. Waxay jacayl ku dhacday nin dhallinyaro ah oo udhashay. Laakiin tan iyo ninkii dhallinyarada ahaa ee ka yimid qoys qani ah, waalidkiis ayaa ku adkaystay inuu guursanayo mid kale, oo ka roon. Anyuta ma istaagi kari waagii noocan oo kale ah oo u dhintay.
Waxaa jiray halyeey kale. In tuulada ku noolaa gabar magaceeda lagu magacaabo Anyuta. Waxay ahayd kalsooni iyo naxariis. Mar uun, nin dhalinyaro ah oo muuqaal soo jiidasho leh u yimid tuuladeeda. Annie iskuma diidi karto, wayna ku kalsoon tahay, laakiin wuu khiyaaneeyey. Ninka ayaa sheegay in uu ku soo laaban doono iyada, laakiin marna marna ma iman. Gabadha ayaa ugu dhakhsaha badan u dhintey niyadjab, iyo ubaxyada cajiibka ah ee ubaxyada ah ee ubaxa, oo u ekaaday indhaha quruxda.
Jarmalka, Pansies waxaa lagu magacaabaa aabaha. Magaca noocaas oo kale ah ayaa lagu soo rogay. Xuubka hoose waa kan ugu weyn uguna qurux badan. Gabadhu waxay calaamad u tahay aabaha dharka u xidhan. Malaha wax yar ka sarreeya - waxay dharka u labisan yihiin. Labada xayawaan ee haray waxay calaamad u yihiin gabdhaha curyaamiinta ah.
Digniin: Waxaa la aaminsan yahay in marka hore hooyo ay kor u kacday, iyo gabadha oo ka hooseysa. Taasi waxay ahayd ilaa Ilaah uu soo dhexgalay. Waxa uu u jeestay ubax, sidaas darteedna wuxuu ku niyad jabay gabadha.
Haddii aad jeceshahay "Pansies", akhri maqaalkeena ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee beerista noocyo kala duwan. Intaa ka sokow, dhammaan khabiirada qurxinta quruxda badan, waxaanu diyaarinnay alaabooyinka leh sawiro iyo sawirro noocyo kala duwan iyo noocyo kala duwan, oo ay ku jiraan gacaliyaha oo dhan "Optimara", oo aad u fiican "Cherries", " "Fog Fog" oo qarsoodi ah, oo xusuusta ubaxyada dooxada "Saamaynta Cagaarka" iyo "Chanson" oo qurux badan.
Pansies waa ubax qurux badan oo ku saabsan legends iyo legends. Ma leh oo keliya burooyinkeeda aan caadi ahayn leh dhibco midab leh oo ku xiran kala duwanaanta. Waa caawiye dhab ah ee cudurada marka daawo dhaqameedku aysan waxtar lahayn.